प्रवास खबर Archives - Citypokhara
२०७६ जेष्ठ १९ , आईतवार June 2, 2019 by Citypokhara.com
काठमाडौं । एक व्यक्ति सडकमा दुर्घटनामा पर्छन् । उनले भिडियो कल गरेर श्रीमतीलाई आफ्नो हालत प्रत्यक्ष देखाउँछन् । त्यसपछि अन्तिम सास फेर्छन् । कसैले रचेको कहानी जस्तो लागे पनि यो भारत उत्तर प्रदेशको वास्तविक घटना हो । बेगुसरायको राष्ट्रिय राजमार्ग-२८ मा मोटरसाइक�
२०७५ फागुन २२ , बुधवार by Citypokhara.com
एजेन्सी । दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेन्टिनामा हालै एउटा निकै दर्दनाक घटना सार्वजनिक भएको छ । एकजना ६५ वर्षका वृद्धले आफ्नै प्रेमिकाकी ११ वर्षीया नातिनीको बलात्कार गरेका छन् । आफ्नै हजुरआमाको ब्वायफ्रेण्डबाट बलात्कारमा परेकी ती बालिका गर्भवती बनेकी थिइन् । अन्ततः
भारतीय लडाकु विमान काश्मिरमा दुर्घटनाग्रस्त,पाइलटको मृत्यु
२०७५ फागुन १५ , बुधवार by Citypokhara.com
काठमाडाैं । भारतीय वायुसेनाको एउटा लडाकु बिमान मिग २१ काश्मिरमा दुर्घटना भएको छ । काश्मिरको कलान गाउँमा विमान खसेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । दुर्घटनामा बिमानका पाइलटको मृत्यु भएको छ । अर्का पाइलटको पनि मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ । मिग २१ ले श्रीनगर बि�
२०७५ पौष १९ , बिहीवार by Citypokhara.com
हङकङ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले हङकङबासीलाई आप्mनो प्रदेशमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । नेपाली महावाणिज्य दुतावास हङकङले आयोजना गरेको नेपालको लगानी तथा व्यापार प्रवद्र्धनमा समकालिन निति तर्जुमा विषयक छलफलमा मुख्यमन्त्री गुरुङले उ�
२०७५ कार्तिक २९ , बिहीवार by Citypokhara.com
पोखरा । नेपालका भजिन्द्रबहादुर क्षेत्री कोरियन मानार्थ नागरिकताबाट सम्मानित भएका छन् । नेपाल र कोरियाबिच संस्कृति आदान प्रदान एवं सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याए वापत कोरियाको सौल महानगरपालिकाले समाजसेवी क्षेत्रीलाई मानार्थ कोरियन नागरिकता प्रदान
बलात्कारपछि बालिका हत्या गर्नेलाई फाँसी !
२०७५ असोज ३१ , बुधवार by Citypokhara.com
पाकिस्तान । पाकिस्तानमा बलात्कारपछि एक बालिकाको हत्या गरिएको घटनामा दोषी पाइएका एक जनालाई फाँसी दिइएको छ। गत ज्यानुअरीमा बलात्कार गरी ६ वर्षीया बालिका जैनब अन्सारीको हत्या गरिएको थियो। हत्या गरी फालिएकी जैनबको शव फोहोरको थुप्रोमा फेला परेको थियो। घटनामा दोष
सहाराको हाइकिङबाट कर्णालीको राजकोट अस्पतालका लागि २४ लाख
हङकङ । कर्णालीको कालीकोटमा १५ शैयाको राजकोट सामुदायिक अस्पताल निर्माणको लागि हङकङका नेपालीहरुले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा सहयोग रकम जुटाएका छन् । सहारा क्लब हङकङद्वारा आयोजित हाइकिङ कार्यक्रममा सहभागी दाताहरुले अस्पतालका लागि सहयोग रकम जुटाएका हुन । क्लव�
महिलाका लागि खतरनाक देश ‘भारत’
२०७५ आषाढ १३ , बुधवार by Citypokhara.com
नयाँदिली (एजेन्सी) । भारत महिलाका लागि विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक देश भएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । ग्लोबल एक्सपोर्टले मंगलबार जारी गरेको एक सर्वेक्षणमा महिलाका लागि विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक देश देखाएको हो । उक्त सर्वेक्षणको नतिजामा यौन हिँसा र महिलालाई नोकर राख
‘राइजिङ कश्मीर’ अखबारका सम्पादकको गोली हानी हत्या
जम्मु–कश्मीरको राजधानी श्रीनगरमा ‘राइजिङ कश्मीर’ अखबारका सम्पादक सुजात बुखारीको बिहीबार साँझ गोली हानी हत्या भएको छ । श्रीनगरको लालचोक सिटी सेन्टरस्थित कार्यालयबाट इफ्तारको भोजमा जाँदै गरेका ४८ वर्षीय बुखारीमाथि गोली प्रहार भएको हो । जम्मु–कश्मीरका डीजीपी �
जागिर पाउन मालिकसँग डेटिङ जानुपर्ने ! मासिक तलब कम्तीमा ८६ लाख
२०७५ जेष्ठ २५ , शुक्रबार by Citypokhara.com
वासिङ्टन । जागिर पाउनका लागि मानिसहरु राम्रोसँग पढ्छन् । यसका लागि अन्तर्वार्तामा पनि मेहनत गर्छन् । तर एक कम्पनीले जागिरका लागि एउटा अचम्मको तरिका अपनाएको छ । यो जागिरका लागि अन्तर्वार्ता नभई मालिकसँग डेटिङ जानुपर्ने शर्त राखिएको छ । अमेरिकाको डेटिङ एप ‘हिंज’ �